7 an-trano * 10W Beam and Laser and Stained LED Moving head light - vaovao & Ny hery sy ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny hetsika lehibe sy antonony isan-karazany
an-trano an-trano an-trano an-trano 7 an-trano * 10W Beam and Laser and Stained LED Moving head light
7 an-trano * 10W Beam and Laser and Stained LED Moving head light
Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light： Level 540°and vertical 180°
Rated power： 80fametrahana mazava tsara
Rated life: Siansa mandroso amin'ny rafitra fampangatsiahana 50,000 hours
Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light: 0% Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light 100% Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light
Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light: L26*W26*H26 cm
Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light: 3.2Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light
an-trano, an-trano, an-trano, an-trano, an-trano. an-trano, Ny hery sy ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny hetsika lehibe sy antonony isan-karazany, Ny hery sy ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny hetsika lehibe sy antonony isan-karazany, Ny hery sy ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny hetsika lehibe sy antonony isan-karazany!
L : Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay?
L : Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay, Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay. Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay, Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay.
L : ary azonao atao koa ny mangataka anay handefa PI ho anao mba hankatoavanao. Mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto izahay momba ny baiko, Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay, Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay.
L : hanamboatra azy ireo izahay ary halefa any aminao na afaka mifanakalo hevitra momba ny vahaolana ao anatin'izany ny famerenana antso araka ny zava-misy marina?
L : ary azonao atao koa ny mangataka anay handefa PI ho anao mba hankatoavanao. Mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto izahay momba ny baiko, hanamboatra azy ireo izahay ary halefa any aminao na afaka mifanakalo hevitra momba ny vahaolana ao anatin'izany ny famerenana antso araka ny zava-misy marina. hanamboatra azy ireo izahay ary halefa any aminao na afaka mifanakalo hevitra momba ny vahaolana ao anatin'izany ny famerenana antso araka ny zava-misy marina.